Isku day 5 Downloadify lagu bedelan karo haddii aysan shuqul qaban cayn kasta
Top Downloadify lagu bedelan karo
Waayo, kuwa idinka mid ah oo aad jeclaan dhagaysto music online adigoo isticmaalaya adeegyada geeyo kala duwan sida Youtube ama Spotify, oo hadda ka dibna laga yaabo in aad rabto in aad si ay u qoraan mid ka mid ah kuwa heesaha si aad u computer. Waxaan ka Yeellay dadaal ah ee isku dayaya in qaar ka mid ah ugu wanaagsan iyo kuwa ugu caansan codsiyada duubo audio ee suuqa. In dib u eegis gaaban waxaan qaadi doonaa eegno Apowersoft Online oo taariikhqorihii ahaa audio, Wondershare Streaming Audio Recorder, Free Sound taariikhqorihii, Aktiv MP3 taariikhqorihii iyo sidoo kale wanaagsan Streamosaur. Dhammaan barnaamijyada ku sameeyo si aad u fiican wixii ay la desogned for, si kastaba ha ahaatee qaar ka mid ah waxay bixiyaan in ka badan.
3. Sound Free taariikhqorihii
, Nidaamka Easy in ay isticmaalaan oo shaqeynayaa ID, Ringtones Editor
Kaliya taageertaa 2 qaabab audio.
Wondershare Streaming Audio Recorder Ku siinayaa awood u leh inay u qoraan content audio online, laakiin waxa ay sidoo kale taageertaa song iyo aqoonsiga artist, aad badbaadinayo dhibaato ah ee tafatir ah, iyo haa tahay, runtii way shaqeynaysaa. Barnaamijka ma aha lacag la'aan ah, laakiin waxa aanu ku siin muddo 7 maalin maxkamad iyada oo aan wax xannibaad ah, taas oo ka badan intii ku filnayd in waqtiga si aad u go'aansato.
Marka aad qortid content aad u eegi karaan in ciyaaryahanka gundhig, la abuuro ringtones iyo iyaga astaysto, kaas oo aad ka dib gali kartaa maktabadda Lugood aad, aad u suurtogasho inay u waafajinta oo dhan ee idevices aad. Barnaamijka ayaa lagu taageerayaa kaliya 2 nooc oo ah qaab MP3 iyo MP4 laakiin aad ajdust kartaa goobaha wax lagu qoro sida. Si kastaba ha ahaatee, isagoo maskaxda ku haysaa in ay u xanbaarsan yahay $ 19 tag qiimaha, waxaan si xor ah u sheegay in aad hesho inta aad bixisay iyo malaha ka badan. Software Tan waxa la set oo ah Casharrada video si aad si aad u bilowdo. Wondershare Ayaa sidoo kale diyaar u ah Mac sidoo kale.
3. Free Sound taariikhqorihii
Voice hawlgelinta, Jadwalka, ay Free
Ma jiro ciyaaryahan gundhig
Free taariikhqorihii dhawaaqa waa lacag la'aan ah gebi ahaanba kor, taas oo ay taageertaa qaabab kala duwan, sida MP3, OGG, WMA iyo regelingen.
UI waa badan soo doonteen oo inkastoo, sida aan hore u soo sheegnay, codsiga uusan taageeri noocyo kala duwan oo ah qaabab, iyo sidoo kale qaabeynta heerka yara iyo tayada content duubay waxa aanu haysan ay ciyaaryahanka u gaar ah, mana qaar ka mid ah muuqaalada badan oo horumarsan tilmaamay ma ee software-ka kor ku xusan. Si kastaba ha ahaatee waxa aanu taageeraan Voice hawlgelinta iyo jadwalka samaynta, taas oo ka dhigaysa in dhammaan aad u wanaagsan oo dhan, tan iyo waa, aynu lahayn illoobin, oo lacag la'aan ah. Sidoo kale waxaa jira muujinta a meesha aad astaysto furaha aad u kulul.
No siyaada ah
Streamosaur waa meel aasaasiga ah ee lagu qoro software aad ka heli karto internet-ka. Waxay leedahay dhowaad waxba waxa rikoorrada hore ay leeyihiin laakiin taageero 2 qaabab: MP3 iyo regelingen. No Voice shaqeyn, ma u Sameynta, faaidaysan lahayn marka ay timaado la habeeyo tayada mid ah waxyaabaha la adiga kugu saabsan si ay u qoraan yihiin. Steamosaur ka bilowdey qoro ka dib markii aad riixdo badhanka iyo in ay wax ku saabsan, si kastaba ha ahaatee dadka aan xiiso u qaababka kale sare u siiyaan baas ciyaaryahankaan, maadaama aanay require'any rakibo wax alla wixii.
Streaming Recoder audio
Free Sound taariikhqorihii
La socosho Player
Tirada qaabab ay taageerayaan 2 2 4 2
Tags id3, cover dayactir, maareeyaan maktabadda music
Sida fikirkaanaga final waannu rumaysan nahay shaxda waa quruxsan sharaxaadda is. Marka ay timaado in bilaash ah software Sound Free iyo Aktiv MP3 dhow waa isku mid. Sound Free ee UI waa xoogaa ka badan u fududahay in ay maraan badan Aktiv MP3 waa. Dhinaca kale Aktiv MP3 taageertaa qaabab dheeraad ah oo laga yaabo in ay fure isticmaala qaar ka mid ah. Streamosaur waa idaad, dhalna tartanka this ah.
Wondershare Bixisaa ah qaababka ugu barbar dhigo dhammaan barnaamijyadooda ku saabsan naga imtixaanka. Tag Qiimaha waa quruxsan macquul ah oo ay tahay diinteena in ay bixisaa in ka badan aad markii hore ku gorgortami. Apowersoft kharash aad u badan (labo jeer sida badan Wondershare), laakiin waxa aan u taageeraan dhammaan qaababka inuu ninka la tartamayay ugu weyn ee uu leeyahay. In kasta oo ay tahay meel kaliya ee software-kayaga imtixaanka in ay u qoraan karaa qaab FLAC oo waxa uu siiyaa kala duwan oo aad kala dooran marka ay timaado Deji marka la barbar dhigo Wondershare.
> Resource > bedelan karo > Downloadify aan innaba shaqayn All? Isku day ay Alternative hadda